Gudoomiyah​a Hay’ada Wadooyinka P/land oo ka qayn galay kullan ka dhacay Italy – SBC
Gudoomiyah​a Hay’ada Wadooyinka P/land oo ka qayn galay kullan ka dhacay Italy
Posted by Webmaster on June 3, 2012 Comments
Gudoomiyaha Hay’ada wadooyinka Dowlada Puntland Egn.Xasan Mire Cali ayaa ka qayb galay kullan caalamiya oo looga hadlayo sidii kor loogu qaadi lahaa kaabayaasha dhaqaale ee wadamada soo koraya ayna ka mid tahay dalka soomaaliya,waxana kullankaasi soo qaban qaabiyay Hay’ada shaqalaha aduunka ee ILO.
In ka badan 22-dowladood oo ka kala socda Latin America,Africa & Asia ayaa shirkaasi caalamiga ah kasoo qayb galay ,wuxuna ka dhacay magalada Torina ee dalka Talyaaniga ,iyadoona intiisa badan looga arinsaday sidii wax badan loogu qaban lahaa dalalka soo koraya ee hada u baahan in la garab gallo isla markasna laga caawiyo horumarinta dhanka arimaha bulshada iyo waxbarashada.
Arimaha ugu muhiibsan ee kullankaani gaarka ah diiradda lagu saaray ayaa waxay tahay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhalinyaradda ku nool dadalka soo koraya sida Africa ,iyadoona loo marayo habka casriga ah ee aduunka horumaray ku tilmaamsaday ,iyo waliba in la hagaajiyo kaabayaasha arimaha bulshada sida caafimaadka,waxbarashada iyo dhisida hagaajinta wadooyinka bur buray ee inta badan la isticmaalo.
Dhamaan dowladihii kasoo qayb gallay kullan kaani ayaa isku raacay inay jirto baahiyo badan oo ka taagan dalalka saboolka ah hadana ay ka jiraan colaad dagaal sida dalka soomaaliya,waxaana lagu tilmaamay arimahaasi oo kale inaan laga aamusi karin ,basle loo baahan yahay in wax laga qabto.
Gudoomiyaha Hay’ada Wadooyinka Puntland PHA Egn.Xasan Mire Cali wakiilka ka ahaa xukumada Puntland ayaa shirka kasoo jeediyay khudbad dheer kana hadlaysa horumarka deegaanada Puntand iyo waliba bur burka ka taagan wadooyinka Puntland.
Mudane Xasan Mire Cali ayaa shaaca ka qaaday Dowlada Puntland ee soomaaliyeed inay wax badan ka qabatay dhanka hagaajinta wadooyinka bur bursan ,wuxuna sheegay inay wali ku mashquulsan yihiin sidii wax badan looga badali lahaa wadooyinka bur buriska iyo waliba hagaajinta dekadaha ku yaala Puntland.
Eng,Mire waxaa uu yiri ” Puntland iyo soomaliya guud ahaanba waxaa ka jira burbur xagga infrastructurka kaasoo 20 sano oo la soo dhaafay ay dhibaato weyn ku ka jirtay, Maamulka Puntland waxaa uu xoogga saaray baahinta maamul wanaagga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, sida jidadka, Biyaha, iyo Tamarta”.
Khudbada uu ka jeediyay Gudoomiyaha Hay’ada Wadooyinka Puntland shirka oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa sheegay inay jiraan hay’ada iyo shirkado gaar loo leeyahay oo ka shaqeeye baahiyada yar yar ee ku dhisan qoyska sida hagaajinta nadaafada biyaha,Isgaarsiinta iyo walina dhanka caafimaadka wuxuna ku baaqay in wax badan laga taageero kuwaasi oo hada ku mashquulsan sidii loo caawin lahaa wax badana laga bari lahaa dhanka qalabka casriga ah ee aduunwaynu ku shaqeeyo.
Sidoo kale shirkaani oo ay soo qaban qaabiyeen madaxda sar sare ee Hay’ada ILO ayaa waxaa ka hadlay madax badan ,waxayna sheegeen in wax badan laga qaban doona baahiyada lagu soo bandhigay madasha shirka ,kuwaasi oo ay ku tilmaameen inay tahay arimo dhab ah oo u baahan in si deg deg ah dalalka soo koraya looga caawiyo.
Ugu danbayntii wafdiga uu hogaaminayo Masuulka ugu sareeya hay’ada wadooyinka Puntland Egn.Xasan ayaa waxaa lagu wadaa inay cagta soo mariyaan wadabo badan ,iyagoona kulamo kala duwan lasoo qaadan doona madaxda dalalka ay booqanayaan,waxayna dib ugu soo laaban doonan magalada Garoowe .
Xafiiska dhexe Hay’ada wadooyinka Puntland
asc waan u hambalyeeynayaa dadaalka uu sameeyay walaalkay eng xassan